प्रधानन्यायाधीशविनै बिहीबार फुलकोर्ट बस्ने, १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने
सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ बैठक बिहीबार (भोलि) बस्दै छ । बैठकमा १९ जना न्यायाधीश हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने सो बैठकमा हुने सम्भावना कम छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशविनाको न्यायाधीशहरूको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले अदालतको सुधारसम्बन्धी बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गोलाप्रथामा सर्वोच्च जान लागेको हो ।
उनीमाथि न्यायाधीशहरूले आचरणको प्रश्न पनि उठाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।
बार कडा आन्दोलनमा
न्यायाधीशहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनमा जान लाग्दा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने भोलि (बिहीबार) काठमाडौंमा मार्च पास गर्दै छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन थप दबाब सिर्जना गर्न बारले मार्च पास गर्न लागेको हो । आज भने बारले देशभरका १८ वटै उच्च अदालतमा प्रतिनिधि पठाएर जबराको विरोध गरेको छ ।
बार १४ कात्तिकदेखि आन्दोलित छ । जबरालाई राजीनामा दिन बारले तीनपटक समयसीमा दिइसकेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा पटक–पटक बाधा पुर्याएको छ । यसरी आन्दोलित बारले सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जहाँ जबराले राजीनामा दिनुपर्ने कारणहरू उल्लेख छ । जबरा नेतृत्वमा न्यायालयको सुधार नहुने निष्कर्ष बारको छ । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको नाइकेको संज्ञा दिइसकेका छन् ।
भाग खोज्दा तनाव
सर्वोच्चमा देखिएको समस्याको सिर्जनाकर्ता प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयं हुन् । समस्याको जडचाहिँ उनले भागबन्डा खोज्नु नै हो ।
३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दा जबराले समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई नियुक्ति दिलाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
त्यससम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दायर पनि भयो । रिटमा उनी पनि विपक्षी छन् । रिटको दर्ता भएको वर्ष दिन हुन लाग्यो । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म भएको छैन । उल्टै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको आरोपको सामना पनि उनले गरिरहेका छन् ।
बारले जनाएअनुसार दीपकविक्रम मिश्र र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीलाई ‘डमी’ रिट निवेदक बनाएर जबराले रिट दर्ता गराउन लगाउँदै आफूविरुद्धको रिटको सुनुवाइ प्रभावित पारेको बताइन्छ ।
नभन्दै रेग्मी र मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । त्यसअघि नै दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइ भने कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन ।
प्रकाशित मिति : मंसिर ८, २०७८ बुधबार १८:२७:३३, अन्तिम अपडेट : मंसिर ९, २०७८ बिहीबार ७:२१:४२